Dr. Tint Swe's Writings: Kidney stones ကျောက်ကပ် ကျောက်
Kidney stones ကျောက်ကပ် ကျောက်
၁။ ဆရာရှင့်ကျမသမီးအသက်ဆယ့်ခြောက်ပါ။ ကျောက်ကပ်မှာကျောက်တတည်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခု Fame ကထုထ်တဲ့ ဆီးကျောက်ပျော်ဆေးသောက်နေရပါတယ်။ ဆေးသောက်တာ တလတော့ရှိပါပြီ။ မသက်သာသေးပါဘူး။ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြံညဏ်လေးသိချင်လို့ပါဆရာ။
၂။ ဆရာဝန် သမီးကျောက်ရှိတယ်။ အသက် ၃၅ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၉၊့့ နိုင်ငံမှာ ထုတ်ပြီး၊ အခုပြန်ရှိတယ်ဆရာ။
တချို့မှာ ရှိမှန်းမသိပဲအကြာကြီးနေတယ်။ တချို့မှာ ရုတ်တရက် အတင်းနာမယ်။ နောက်ကျော၊ ဘယ်-ညာ နာမယ်။ ပေါင်ခြံနာမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ ကိုယ်အနေအထားပြင်ပေးလဲ နာတာမသက်သာဘူး။ နာပုံနာနည်းကလဲ အပျော့-အပြင်း မတူဘူး။ အရမ်းနာလို့ ပျို့အန်တတ်တယ်။ တသက်မှာ ဒီလောက်နာတာမခံစားရဘူးလို့ တချို့ကပြောမယ်။ အဲလိုအထိ နာတာကို Pain လို့မပြောပဲ Agony လို့ပြောတယ်။ ကလေးမွေးရတာ၊ အရိုးကျိုးတာထက် နာတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဆီးထဲမှာ သွေးပါနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်ရင် ဆီးအောင့်သလိုခံစားရမယ်။ ဖျားမယ်၊ ချမ်းမယ်၊ ဆီးသွားရင်နာမယ်။ တခါတလေ ဆီးအသွားရခက်မယ်။ သွားချင်ရင် အမြန်ပြေးရမယ်။ ကျားလိင်အင်္ဂါနေရာအထိနာနိုင်သေးတယ်။
ဘာလို့ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်သလဲ
တခုထဲလဲ မဟုတ်၊ တိတိကျကျလဲ ပြောမရပါ။ ဆီးထဲမှာ အရည်၊ ဓါတ်ဆားနဲ့ အက်စစ်ဓါတ်တွေဟာ ဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရာကနေ ဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဆီးထဲက ပုံဆောင်ခဲအချင်းချင်း ကပ်တွယ်ပြီး ကျောက်ဖြစ်မှာကို တားနိုင်တဲ့သတ္တိ ရှိနေတယ်။
• ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ စောစောသေချာ ကုသပါ။
• ကိုကာကိုလာ၊ (ကေဖင်းပါအရည်၊ အချို့အရည်တွေလဲ မသင့်ပါ။
(၁) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ရှော့ခ်လှိုင်းသုံးခွဲစိတ်ကုသနည်း
Ultrasound waves အာလ်ထွာဆောင်းသုံးတယ်။ တုန်ခါမှုကနေ ကျောက်ကို ချေဖျက်ပေးမယ်။ သေးသေးလေးတွေက ဆီးထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်။ နာမယ်။ ထုံဆေးနဲ့လုပ်ရတယ်။ ကျောက်က ဆီးပြွန်ထဲမှာ ပိတ်မိနေရင် Ureteroscope ကရိယာသုံးမယ်။
ကျောက်က ဆီးပြွန်ထဲမှာ ပိတ်မိနေရင် လုပ်နိုင်တယ်။ Ureteroscope ကရိယာသုံးတယ်။ ကျောက်တွေ့ပြီဆိုရင် Specialized instrument အထူးကရိယနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Laser beams လေဆာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကျောက်ကိုခွဲထုတ်မယ်။
1. Agony ဆီးလမ်းကျောက်က နာခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/agony.html
2. Drugs and Kidneys ကျောက်ကပ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/drugs-and-kidneys.html
3. Glomerulonephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/glomerulonephritis.html
4. Hematuria ဆီးထဲသွေးပါခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hematuria-causes.html
5. Hydronephrosis ဟိုက်ဒရိုနဖရိုးဆစ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hydronephrosis.html?q=Kidney+stones
6. IgA nephropathy အိုင်ဂျီအေ ကျောက်ကပ်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/iga-nephropathy.html
7. Kidney cancer ကျောက်ကပ် ကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/kidney-cancer.html
8. Kidney Diseases in Children ကလေး ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/kidney-diseases-in-children.html
9. Kidney failure ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/kidney-failure.html
10. Kidney Stones Home Remedies ကျောက်တည်တာသက်သာအောင် အိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/kidney-stones-home-remedies.html
11. Kidney stones ကျောက်ကပ်-ကျောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/kidney-stones.html Kidneys ကျောက်ကပ်ကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ခြင်း
12. Polycystic Kidney Disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/polycystic-kidney-disease.html
13. Renal Dialysis ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/renal-dialysis.html
14. Warning Signs Of Kidney Failure ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာလေးခု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/warning-signs-of-kidney-failure.html
15. World Kidney Day ကမ္ဘာ္ဘ့ကျောက်ကပ်နေ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/world-kidney-day.html
မြန်မာပြည်သားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။